Xaaladda Somaliya oo murugsan (Ijiid aan ku jiido) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xaaladda Somaliya oo murugsan (Ijiid aan ku jiido)
Xaaladda Somaliya oo murugsan (Ijiid aan ku jiido)
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ku wada sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka, inkastoo aan lagu guuleysanin in shirkii la filayay ay dhammaantood ka wada qaybgalaan.
Illaa hadda Madaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo dhiggiisa Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaan ku biirin shirka ay ku wada sugnaayeen madaxda saddexda maamul ee kale iyo dowladda dhexe.
Hase ahaatee, war saxaafadeed wadajir ah oo Puntland iyo Jubbaland ay maanta soo saareen ayay ku sheegeen in mas’uuliyiinta dowladda dhexe “ay xagal daacinayaan” shirkii loo ballan sanaa inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho.
Prof. Ibraahim Faarax Bursaliid, oo ah khabiir falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, ayaa BBC-da u sharraxay dhowr sababood oo uu fikir ahaan qabo in beesha Caalamku aysan cadaadis xad dhaaf ah ku saari karin siyaasiyiinta khilaafku u dhaxeeyo.
“Beesha Caalamka ee la sheegayo waxay noqon karaan waddamo ay Soomaaliya u wada hadli karaan dal ka dal ama waa urur goboleedyo heer gobol ama heer qaaradeed ah ama waa ururro caalami ah sida Qaramada Midoobay iyo wixii la mid ah, marnaba Soomaalidu kuma khasbana Jamhuuriyad ahaan iyo ka dowlad ahaanba in xaanshi loo soo qoray ay ku dhaqanto ama ay raacdo.”
“Waxaad mooddaa in lasoo dhaafay xilligii xukuumadda Soomaaliya ay ku jirtay ku meel gaarnimada oo laga caawinayay dal dhiska, nabadeynta iyo dib u mideyntiiba. Tan iyo doorashadii 2012-kii waxaad mooddaa in laga baxay ku meel gaarnimadii, sidaas darteedna ay tahay in la xurmeeyo gobanimada iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda,” ayuu yidhi Prof. Bursaliid.
“Sabab ugu muhiimsan ee aysan Beesha Caalamku aanay dhinacyada isugu soo dhaweyn karin, wax weynna aysan u qaban karin waa inaanay dooneynin in danihii ay dalka ka lahaayeen xukuumadda markaas jirta ay wax kaga waayaan ama maamul laga yaabo barito in laftigiisa uu muhiimad gaar ah yeesho ay diidayaan inay aad u cadaadiyaan,” ayuu yidhi Prof. Bursaliid oo la hadlayay BBC-da.
Lama saadaalin karo waddada kale ee furan haddii uu fashilmo shirka wali qabsoomi la’ ee rajada laga qabo inuu Muqdisho ku dhex maro madaxda Soomaaliya, kaasoo ujeeddadiisu tahay in lagu dhammeystiro heshiiskii doorashada ee la gaaray 17-kii bishii September ee sanadkii 2020-kii.
Previous articleFoosiya Abiikar oo sheegtay in geba-gabo marayo wejiga 2aad tallaalka COVID-19
Next articleGudoomiyaha Golaha Shacabka oo cafis u fidiyay Xildhibaanadii la ganaaxay